Xoojinta ciddiyaha biogel
Beauty iyo caafimaad Daryeelka jidhka
Ma aha timaha iyo maqaarka oo keliya, laakiin sidoo kale ciddiyaha, waxay la dhibayaan saamaynta xun ee deegaanka. Intaas waxaa sii dheer, tan dambe waxay ka timaadaa dhaqidda suxuunta, ama arrimaha kale ee qoyska. Xoojinta ciddiyaha leh biogel ma aha oo kaliya gacmahaaga wax aad u qurux badan, laakiin sidoo kale waxay si weyn u hagaajinayaan taariiqyada ciddiyaha, iyagoo ilaalinaya dhaawacyada.
Sida loo xoojiyo ciddiyaha biogel?
Faa'iidada biogel-ka waxay naftooda ku hadlaan:
Halabuurka caadiga ah;
ka ilaalinta chips;
hawlgal muddada dheer ah;
xoojinta iyo bogsashada ciddiyaha;
fursada lagu doorto naqshad shaqsiyeed;
saarista fudud ee gelinta.
Xoojinta ciddiyaha dabiiciga ah ee biogel waxaa badanaa la sameeyaa markii ugu horeysay ee ciddiyaha gaaban. Iyada oo nidaam kasta oo cusub uu xaaladoodu wanaajiso, kaas oo kuu oggolaanaya inaad u kordhiso dhererka loo baahan yahay si dhakhso ah. Khilaafka kaliya ayaa ah xasaasiyadda ku jirta qaybaha bayoolojiga iyo curyaaminta ciddiyaha. Haddii margaadhaada la yareeyo, biogelku ma awoodi doono inuu sii wato muddo dheer.
Si ka duwan noocyo badan oo gal-jir ah, qotogaraamku wuxuu ka kooban yahay kalsiyum iyo borotiin, iyo sidoo kale khudradda khudradda. Nidaamka loogu talagalay niyadjabka waa mid aad u adag:
Nogtium waa in la siiyaa qaabka lagama maarmaanka u ah, si loola tacaalo dusha buste si aad uga dhigto mid adag. Tani waxay ka hortagi doontaa biogel-ka in laga saaro.
Dheecaan dheeraad ah oo ku saabsan saxanka ciddiyaha waxaa lagu dabaqaa fuuqbax shaaha oo khaas ah, kaas oo isla mar ahaanta ku jira nafaqooyinka iyo xoojinta qaybaha.
Ka dib markii lagu qalajiyo faro-gaaban lakabka khafiifka ah ku dheji khariidad-jilicsan. Nidaamkan waxaa lagu buuxin karaa qalajiyaha daaqada. Haddii aad u baahatid nicin dhalaalaya, ama qurxinta qurxinta, hal tallaabo oo dheeraad ah ayaa loo baahan yahay.
On top of lakab daahir ah, midabka biogel midab leh ayaa laga codsadaa, taas oo muuqaalkeedu uusan ka duwanayn naadiga Shellac . Waxa kale oo aad isticmaali kartaa gogol-xajin qaylo-dhaaneed si loo furo qurxinta iyo sharafyada.
Ka dib marka manuubka la dhammeeyo, ciddiyaha waxaa mar kale lagu dhejiyaa nalka ultraviolet ilaa ay gebi ahaan qalalan yihiin.
Waxaad ka iibsan kartaa diyaar garow loogu talagalay in lagu xoojiyo ciddiyaha leh biogel, taas oo dhammaan qaybaha lagama maarmaanka u ah habka isdaba-marinta iyo xitaa buraash leh laambad. Laakiin, kahor intaan la samaynin sida soo iibsiga, fiiri fiidiyow yar oo ku saabsan habka loo adeegsado gelitaanka. Ma hubtaa inaad adigu naftaada u qaban karto naftaada oo dhan? Tiknooloojiyada si loo xoojiyo ciddiyaha biogel ma cafiyo xitaa cilladaha ugu yar!
Doorashada khariidadda ugu fiican ee ciddiyaha
Haddii aadan ogeyn nooca biogel ku wanaagsan yahay ciddiyaha, waxaad isticmaashaa talada xirfadleyda xirfadleyda. Waxay kugula talinayaan inaadan badbaadin qalabka, gaar ahaan haddii aad go'aansato inaad samayso nidaamka naftaada, oo aanad cabin.
Shirkadda ugu caansan ilaa taariikhda, soo saarida biogel - Irisk Professional, waa shirkad Maraykan ah oo aan shaki ku jirin. Nasiib darro, dhawaanahan waxaa jiray warar badan oo ku saabsan badeecada shirkadan. Haddii aad dalbato Toffee online, fadlan ogow in magaca calaamada uu ka kooban yahay laba eray. Shirkadda leh magaca hal eray, Irisk, waa Shiine ah iyo tayada qulqulatooyinkani waa mid aad u xun.
Dib u eegista wanaagsan ee sheyga shirkadda Ruushka Masura. Biyogeliyeyaasha ee soo-saaraha waxaa lagu gartaa iska caabin wanaagsan iyo sahlan isticmaalka. Haa, iyo qiimaha ay aad u bani-aadminimo! Shirkadda ugu wayn ee shirkadani waa shirkadda Moscow ee Madelon. Waxyaabaha ay ka midka yihiin badeecooyinkaas iyo qiimaha ay ku baxaan waxay ku dhow yihiin isla midka.
Biogels ka Ibd waa mid aad u wanaagsan, laakiin way adag tahay in laga helo iibka, marka laga reebo waxay ka soo baxaan qayb ka sarreeya qiimaha.
Rinjiga jilicsan ee ciddiyaha
Sidee loo soocaa casaankii casaankii kadib?
Tendonosis ee wadnaha wadnaha - daaweynta
Soo xidhid ciddiyaha
Maxay tahay baahida loo qabo ciddida ciddida ku jirta?
Spurs on cirbadaha - sababaha
Qubeyska xoojinta ciddiyaha
Dhalashada dhalashada ayaa koreysa
Saliid ka soo urta cagaha
Sawirrada dayrta ee 2016
Muxuu laabta u xanuunsanayaa caadada ka hor?
Sidee loo noqon karaa mid qurxoon oo soo jiidasho leh?
Kaabashka Savoy - wanaagsan iyo xun
Colin Jost ayaa markii ugu horreysay ka hadashay suugaankiisa Scarlett Johansson
Xanuunka dhabarka u dhexeeya scapulae
Ukun ukunta - wanaagsan iyo xun
Sidee loo dhejiyaa foornada musqusha?
Xaanshida suunka ah ee loogu talagalay jikada - xeerarka ugu muhiimsan ee xulashada, oo aan la dayicin karin
Waa maxay saliidda jirka?
Noocyada silhouettes ee dharka
Nifedipine - calaamadaha loo isticmaalo
Ivan Reon iyo Alfie Allen
Sidee loo labistaa dhalashada?
Zephyr - cuntooyinka macmacaanka delicious at guriga
Koronto-dhaliyaha ee guriga
Marxaladaha isku dhaca
Abbaaraha timaha ee qaabka Giriigga
Maalinta Jacaylka - sheekada fasaxa
Dib u dejinta nafaha
Sidee loo qaadaa hemoglobin?